Mombamomba ny orinasa - Qingdao Junray Intelligent Instrument Co., Ltd.
Qingdao Junray Intelligent Instrument Co., Ltd.dia natsangana tamin'ny volana Aogositra 2007. Orinasa teknolojia avo lenta izay miompana amin'ny R&D amin'ny fitiliana zavamaneno. Manome fitaovana sy serivisy fikarohana azo antoka sy azo antoka izahay amin'ny fanaraha-maso ny tontolo iainana, biosafety, fandrefesana ary fikajiana.
Qingdao Junray Intelligent Instrument Co., Ltd.manana tetikasa R&D feno sy ny fahafaha-miasa, manana departemanta 8 ankehitriny ao anatin'izany ny teknolojia, laboratoara, milina, famolavolana indostria, famokarana andrana, miaraka amina mpiasa 90 mahery. Ny orinasanay dia manana ekipa fanaterana famokarana sy ekipa fitantanana kalitao feno, totalin'ny mpiasa 110 mahery, izay afaka manome antoka fa tsara ny fandefasana fitaovana avo lenta sy ara-potoana ho an'ny mpanjifa.
Ny orinasa lehibeao anatin'izany ny saron-tava, ny mpanapa-doko amin'ny fandidiana, ny fitaovana fitiliana ny efitrano fidiovana, ny tester sivana HEPA ho an'ny kabinetra biosafety, ny santionany amin'ny microbe ary ny fitaovana famakafakana, ny fitaovana fananganana aerosol sy ny fitsapana. Ankoatr'izay, manome vahaolana manokana momba ny aerosol manokana sy vahaolana momba ny bio-santionany ihany koa izahay.
Hatramin'ny fiparitahan'ny valanaretina COVID-19 tamin'ny fiandohan'ny taona 2020, ny maska ​​sy fitaovana fanandramana fitaovana fiarovana ary fitaovam-pandrefesana mikraoba dia nampiasaina mba hanomezana fiarovana ara-pitsaboana matanjaka ho an'ny mpiasa ara-pitsaboana sy ny besinimaro amin'ny hopitaly anatiny sy avy any ivelany, sampana fanaraha-maso fitaovana fitsaboana, ivon-toerana fizahana sakafo sy rongony ary singa hafa. Anisan-dry zareo,Ny fahombiazan'ny sivana ZR-1006 sombin-tsarimihetsika ary mpitsikilo fanoherana ny fivoaran'ny rivotra, ZR-1000 tester de efficace filtration bacteria (BFE) dia naondrana tany Alemana, Angletera, Singapore, Indonezia ary firenena hafa.